Ndị na-emepụta Platform Aluminium Work & Suppliers | China Aluminom Work Platform Factory
Aluminium ikuku na-arụ ọrụ ikpo okwubụ vetikal ọrụ ụdị ikuku ọrụ n'elu ikpo okwu na ìhè arọ nke bụ adaba move.There bụ multiple nlereanya na-enye gị ịhọrọ, otu mast aluminum keikuku ọrụ n'elu ikpo okwu, dual mast aluminum ikuku ọrụ n'elu ikpo okwu na onwe propelled ụdị aluminum ikuku ọrụ n'elu ikpo okwu. Akụrụngwa ahụ na-eji profaịlụ aluminom dị ike dị elu iji belata ngbanwe na-ebuli elu nke ọma.
Nhazi dị elu Single Mast Aerial Work Platform nwere ọtụtụ uru, ọrụ anọ Outrigger Interlock, ọrụ mgba ọkụ nwụrụ anwụ, nchekwa dị elu mgbe ọ na-arụ ọrụ, ike AC n'elu ikpo okwu maka ojiji eletriki, Cylinder Holding Valve, ọrụ mgbochi mgbawa, oghere forklift ọkọlọtọ maka nbudata dị mfe. ......
Single Mast Aerial Work Platform bụ na kọmpat Ọdịdị, nwere ike banye warara uzo; profaịlụ alumini dị elu dị elu, ịdị arọ dị arọ, ike dị elu, ebuli elu kwụsiri ike, enweghị ahịrị kwụgidere, jitter crawling, enweghị mkpọtụ na-adịghị mma;
Na ndabere nke otu-mast aluminum aerial platform work platform, dual mast aluminum alloy aerial work platform na-eme ka tebụl dị elu ma na-ebuli elu nke ikpo okwu, ka o wee nwee ike ime mgbanwe na ọrụ ikuku dị elu.
High Configuration Dual Mast Aluminum Aerial Work Platform nwere ọtụtụ uru: anọ Outrigger interlock ọrụ, onye nwụrụ anwụ ọrụ mgbanwe, elu nchekwa mgbe arụ ọrụ, AC ike n'elu ikpo okwu maka electric ngwaọrụ ojiji, cylinder jide valve, mgbochi mgbawa ọrụ, ọkọlọtọ forklift oghere maka mfe loading. .
Akwụkwọ ntuziaka na-ebuli Aluminium Aerial Work Platform dị mfe, dị fechaa ma dịkwa mfe ịkwaga. Ọ dabara maka iji na gburugburu ebe ọrụ dị warara. Onye ọrụ nwere ike ịkwaga ma rụọ ya. Agbanyeghị, ikike ibu dị ala ma nwee ike iburu ibu ma ọ bụ ngwaọrụ dị obere. Achọrọ ndị ọrụ ka ha jiri aka bulie ngwaọrụ ahụ gaa.....
Ọ na-anabata unit hydraulic integral, yana valvụ cartridge, yana ọrụ mbelata ihe mberede. Enwere ike ịkwado ụdị ọ bụla nwere ike batrị dịka ihe ndị ahịa chọrọ. Nabata otu igwe eletrik agbakwunyere onwe ya, nke nwere nchedo ntapu yana nchedo oke ibu. Emebere akụrụngwa ahụ na ogwe njikwa onwe ya abụọ ka ndị ọrụ wee nwee ike ijikwa akụrụngwa n'agbanyeghị ma ha nọ n'elu ikpo okwu ma ọ bụ n'ala. Na mgbakwunye, anyị ga-ejisi ike na-akwado anyị onwe-propelled aluminum ọrụ ikpo okwu. Ndị ọrụ nwere ike ịchịkwa mmegharị na ibuli akụrụngwa na tebụl ozugbo. Ọrụ a na-eme ka ọ rụọ ọrụ nke ọma mgbe ọ na-arụ ọrụ n'ụlọ nkwakọba ihe ma na-echekwa oge ọrụ nke imeghe na imechi ụkwụ.